Tsy mandry ny tany ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Rehefa tsy mandry ny tany dia mandry andriran’antsy ny olona. Saika isan’andro dia handrenesana fanafihana etsy sy eroa. Misy herisetra sy vonoan’olona ary faharavam-pananana. Zary zava-mahazatra isan’andro toy ny fahavoazan’ny Covid-19 ny olona maty. 3,4,5…tafiakatra an-jatony. Mbola tsy taitra isika. Misy EPP manara-penitra hajoro amin’ny tanàna sasany, dia misy fonja manara-penitra aorina amin’ny faritra maro. Toa tsy marina intsony ny hoe, « isaky ny varavaran-tsekoly iray misokatra dia varavaran’ny fonja iray mihidy ».
Mampihorin-koditra ny mandre andian-jiolahy manara-penitra na fitaovam-piadiana, na tekinika na firaisan-kina sy fahaiza-manao amin’ny ratsy. Ambatondrazaka, faritra Bongolava, eto an-drenivohitra sy ny manodidina tsy lavitra na Ambohimangakely na Imerintsiatosika na Ambalavao atsimon-drano… Manjaka ny jiolahy ary tsy afaka miaro tena ny mpiray tanàna sady tsy maharo ny olona intsony ny fiarahamonina.
Amin’ny faritra andrefana iny, toy ny ao Tsiroanomandidy dia zary fitadiavana ny asan-dahalo. Tsy dia ahitana zavatra manara-penitra loatra any, afa-tsy ny fomba fangalarana. Iray lasitra ny mpitandro filaminana, ny mpitsara, ny mpiasam-panjakana, ny olom-boafidy fa toa lalam-pihariana ny halatra omby. Zary fiaraha-misakafo ny fiombonana antoka amin’ny fifampiarovana, ka tsy nofon-kena mitam-pihavanana intsony, fa ny vola an-dovia no mahatonga loha tapaka, toy ny an’i Joany Batista. Rahoviana angaha no handalo ny filoha fa tsy any Atsinanana ihany no misy olona, fa i Bongolava koa mila zavatra manara-penitra ?
Manampy trotraka ny habibian-draolombelona ny « afo ». Mirehitra ny tanety, may ny trano am-polony maro tao ho ao. Mitombo ny faharavam-pananana sy ny tsy manan-kialofana. Impiry moa ny teto andrenivohitra tamin’iny faritra iva iny nahita afobe ? Ny any amin’ny faritra, tsy lazaina, toy ny tany Fenoarivo be. Ny tanety sy ala arovana moa dia toa efa arendrina mandavan-taona. Tsy loza voajanahary toy ny haintany maha kere ny atsimo no mampibaribary fahantrana, fa ny olombelona afotetaky ny eritreritra no manao longoa mitoto-bozaka ho an’ny ampitsony.
Rahoviana ny Gasy vao higoka ny vokatry ny herim-pony fa tsy ho baboin’ireo lava tanan-tsy miasa ? Rahoviana no hisy fitoviana ka hijoro isam-pokontany ny EPP manara-penitra, isaky ny firaisana ny CEG, isaky ny distrika ny lisea ary isaky ny faritany na faritra ny Oniversite ? Sa natao ho an’iza ihany ny fenitra ? Dia hizara roa koa ve ny zaza malagasy, satria hisy ireo tsy mba manara-penitra ? Hisy faritra tsy hahita tana-masoandro mba hiposaka, satria lavitry ny fampandrosoana. Mbola hizara roa ny firenena, dia ny tany lavitra andriana fa i Baroa no fanjakana tsy refesi-mandidy, ary ny tany mandry ivohon’ny vato satria tsara mpiantoka naman’ny vonona.
Raha mbola tsy madio ny asam-panjakana fa zary sehatrasa fivelomana fotsiny ho an’ny maro ; raha mbola safidy politika ny fanorenana fotodrafitrasa, fa tsy mitondra fampandrosoana noho izy ireny miteraka asa sy famokarana ; dia ho kere lava any Atsimo ; fanjakan’ny dahalo ny any Andrefana ; famotehana ala any Atsinanana ; fahantrana lalina eto Afovoany ; ary hitoka-monina ny any Avaratra. Na dia atao faritra mahaleo tena aza ny isam-pokontany, dia varahina sy kipantsona maneno no be, ary nofinofy ny hanantena fampandrosoana mirindra sy maharitra. Mbola ho firenena anisan’ireo mahantra eran-tany ihany i Madagasikara sy ny mponina ao aminy.